Ciidan dowladeed maahan ee waa cadow – Mahad Salaad | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya – Ciidamada Dowladda ayaa caawa mar kale, magaalada Muqdisho, ku toogtay Allaha u naxariistee Mahad Cabdiraxmaan Maxamuud, oo ka mid ahaa dhallinyarada Caasimadda, kadib makii ay xalay khaarijiyeen Sakariye Maxamuud Xuseen iyo Sowdo Maxamuud Xuseen oo ahaa walaalo.
Sida ay wararku sheegayaan Mahad, ayaa ka tirsanaa Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed, waxaana salaaddii cisho ka dib lagu toogtay Isgoyska Zoope ee magaalada Muqdisho, dhaawac ahaan ayaa loo geeyay Isbitaalka Digfeer halkaasoo uu ku geeriyooday.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad, oo ka hadlay toogashada Mahad Cabdiraxmaan, ayaa askarta xalay iyo caawa dhallinyarada dilay, ku tilmamay cadow dhiigga dhallinta loo soo diray.
“Ciidan dowladeed maahan ee waa cadow dadka loo soo diray. Ciidamada xalay Sakariye iyo Sowdo dilay, caawana Mahad Cabdiraxman xabadaha la dhacay waa in la soo qabto si degdeg ahna sharciga loo horkeeno haddii kale dadka reer Muqdisho waxay ku qasbanaan doonaan in ay hubkooda qaataan si ay isaga difaacaan cadowgan duulaanka ku ah”. Ayuu yiri xildhibaan Mahad.
Dhanka kale, Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Cabdulqaadir Maxamed Jaamac, ayaa dhawaan shaaciyay in gacanta lagu dhilay tuhunsanayaasha dilalka Sakariye, Sowdo iyo Mahad.
“Waxaan Shacabka Soomaaliyeed la wadaagayaa in ciidamada amaanka ay igu war geliyeen ay gacanta lagu dhigey dadkii lagu tuhunsanaa iney geeysteen dilkii walaalaheena Sakariye Sowdo, Sidoo kale waxaa gacanta lagu soo dhigey qofkii dhibka u geystey walaalkeena Mahad”. Ayuu yiri Wasiir Jaamac.
Sidoo kale, Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed, ayaa xaqiijiyay in baaritaan ka dib ay maanta ku guulaysteen in ay gacanta ku soo dhigaan eedaysenayaashii xalay rasaasta ku dilay labada marxuum ee kala ah Sakariye Maxamuud Xuseen iyo Sowda Maxamuud Xuseen.
Magacyada eedaysaneyaasha, aya lagu kala sheegay Cabdiwaayeel Macallin Aadan iyo Dayax Nuur Cabdi Aadan, waxayna ku jiraan gacanta Dowladda, sida lagu sheegay warka ka soo baxay Ciidanka Booliiska.